MM Daily Life - Page 524 of 578 - News and Media
၂၀၂၀ခုနှ စ် ( ၈ )လပိုင်းအတွက် (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် (၁)လ စာ ဟောစာတမ်း…
July 30, 2020 by MM Daily Life
၂၀၂၀ခုနှ စ် ( ၈ )လပိုင်းအတွက် (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် (၁)လ စာ ဟောစာတမ်း… ၂၀၂၀ခုနှ စ် ( ၈ )လပိုင်းအတွက် ခုနှစ်ရ က်သားသမီးများ တစ်လ စာ ဟောစာတမ်းလာပါပြီ… (1) တ နင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ဤလအတွင်း စိန်ထည် ပစ္စည်းများ စက်ပစ္စည်းများ ၀င်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းသစ် လုပ်ရန် အကြံအစည် ကောင်းများ အဆက်အသွယ် ကောင်းများ ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤကာလအတွင်း ပစ္စည် များကို ထုခွဲရောင်းချ၍ လုပ်ငန်းအသစ် ကြီးကြီးမားမား စရန် မကောင်းသေးပါ။ ဤကာလအတွင်း ထီမထိုးသင့်ပါ။ ထီပေါက်လျှင် မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညံ့သွားတတ်သည်။ မသွားချင်သော ခရီးများ စိတ်ညစ်စရာ … Read more
ရှင်ဘုရင် တော်ကောက်ခံရမယ့် မိန်းမတွေဟာ သူတောင်းစားတွေနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ်
July 29, 2020 by MM Daily Life
ရှင်ဘုရင် တော်ကောက်ခံရမယ့် မိန်းမတွေဟာ သူတောင်းစားတွေနဲ့ လွဲတတ်ပါတယ် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ… ဟုတ်တယ်.. မထူးဆန်းဘူး…ထူးဆန်းတာတာကတော့ အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ တန်ဖိုးမထား ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ် ချောင်ရင်နှိုက်…ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့…အဲဒါ ထူးဆန်းနေပြီ ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ် မရင့်ကျက် ခင်ကာလတွေ… တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို ပထမဦးဆုံး…သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်ဒုတိယ… ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ် တတိယ…သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ် အခုတော့…အဲလို (၃) မျိူးသော ဒေါသတွေ … Read more
အချစ်ဦး နဲ့ ပေါင်းဖက်ဖို့ နှစ် (၃၀) စောင့်ခဲ့တဲ့ ဇော်ထွန်း(ရုပ်သံ)
“လူပျိုကြီး လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် အေးချမ်းတဲ့ မိသားစု ဘဝ ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်လို့ အသက် (၄၇) နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့တယ်…ဇနီးသည်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၃၀) လောက်က ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချစ်ဦး ပါ သူ့ဆီမှာ ခင်ပွန်းဟောင်း နဲ့ ရခဲ့တဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက် ပါလာပေမယ့် ကိုယ့် သမီးအရင်းလေး လို ချစ်ပါတယ်” လို့ သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ ဇော်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ လူကြမ်းကြီးပေမယ့် တကယ့်အပြင်လောကမှာတော့ အသဲနုတဲ့ ချစ်တတ်သူကြီးပေါ့ဗျာ… ရုပ်ရှင်ထဲက လူဆိုး၊ လူကြမ်းကြီးတွေဟာ အပြင်မှာတော့ လူကောင်း သူကောင်းလေးတွေများကြပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကကြည့်ရတဲ့ နေထက်လင်းကားတိုင်း ဇော်ထွန်း၊ ကိုကိုဦးတို့မပါမဖြစ်တွေ..ပါလိုက်တိုင်းလည်း လူဆိုးနေရာကကြီးပါဘဲ။ ရုပ်ရှင်ထဲက တစ်ချို့မင်းသားတွေကတော့ လူကောင်း သူကောင်းလို သရုပ်ဆောင်ရပေမယ့် … Read more
မိဘပိုက်ဆံနဲ့ ဂိမ်းဆော့ Fb သုံးပြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မိဘကိုလုပ်ကြွေးနေတဲ့ ၁၀ နှစ်သားလေး
မိဘပိုက်ဆံနဲ့ ဂိမ်းဆော့ Fb သုံးပြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မိဘကိုလုပ်ကြွေးနေတဲ့ ၁၀ နှစ်သားလေး ဒီနေ့ နေ့လည်တုန်းက ဆိုင်ကယ်နဲ့ မိန်းနားသွားရင်း ဘီးပေါက်ပါလေရော။ အဲ့ဒီတော့ တွန်းပေါ့လေ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဆိုင်က အဖိုးကြီးတစ်ယောက် သူကကြည့်ပြီး ကျွတ်လဲရမှာတဲ့။ ကလစ်ဆိုင်ကယ်မို့ သူမဖြုတ် ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ခက်တယ်တဲ့ ဟုတ်တယ် Click ဆိုင်ကယ်တွေက နောက်ဘီးဖြုတ် ရတာခက်တယ် ။ ရှေ့နားမှာ ဘီးဖာတဲ့ဆိုင်ရှိတယ် တစ်ပြပဲ ဆိုတာနဲ့ ဆက်တွန်းသွားလိုက်တာ ၆၉ လမ်းနဲ့ ၃၉ လမ်းဆုံမှာ ဒီဆိုင်လေး တွေ့ပါလေ ရောဗျာ။ ဘီးဖာပေးတဲ့ ဆရာက အသက် ၁၀ နှစ်ဆိုတော့ ဟဖြစ်ပါ့မလားပေါ့။ နာမည်က မင်းခန့်ကျော်တဲ့။ ကျောင်းက ၄ တန်းဖြေထားတယ်ဆိုပဲ … Click ဆိုင်ကယ်ကို … Read more
”လူတိုင်း ထီပေါက်ချင် ကြတယ်.. ဒီနည်းကို မသုံးကြလို့ မပေါက်ကြသေး တာပါ”
”လူတိုင်း ထီပေါက်ချင် ကြတယ်.. ဒီနည်းကို မသုံးကြလို့ မပေါက်ကြသေး တာပါ” အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာတော်…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှိစဉ်ကေ ကာဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေး တံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေ သတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ပေစာ တစ်ခုထဲ … Read more
သင့်မှာ သဝန်တိုတတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုလျှင် ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်…
သင့်မှာ သဝန်တိုတတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုလျှင် ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်… ရည်းစားရှိတဲ့သူတိုင်းဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားက ကိုယ့်ကိုချစ်တော့ သဝန်တိုမှာပဲ။ ဒါကိုအပြစ်သွားပြောလို့တော့မရပါဘူး။ တကယ်လို့သင့်မှာ သဝန်တိုတတ်တဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေကို သိထားဖို့ လိုပါမယ်နော် …။ သဝန်တိုတာက ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ဆိုတာကို နားလည်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ တချို့က သဝန်တိုတာကို မကြိုက်ကြဘူး။ တကယ်မချစ်ပဲ အပျော်ဆိုရင် ဘယ်သူ့မှ သဝန်မတိုပါဘူး။ ဟန်ဆောင်ပြီး သဝန်တိုပြနေတာ ဆိုရင်တောင် သိသာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူ သဝန်တိုတာကို စိတ်ရှုပ်စရာလို့တော့ မတွေးပါနဲ့ …။ ကိုယ့်ချစ်သူက သာမာန်ထက်ပိုပြီး သဝန်တိုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူနားလည်အောင် သေချာရှင်းပြထားပါ။ သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယောင်္ကျားလေး (သို့) မိန်းကလေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြထားပါ။ သူငယ်ချင်းဆိုလည်း တစ်ခါတည်းသာ မိတ်ဆက်ပေးပြီး အရာရာကို ပြောပြထားလိုက်ပါ။ … Read more
ဝက်ခြံလုံးဝသက်သာပြီး နောက်လည်း ထပ်မထွက်စေချင်ရင် ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ…
ဝက်ခြံလုံးဝသက်သာပြီး နောက်လည်း ထပ်မထွက်စေချင်ရင် ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ… ပျိုမေတို့ မျက်နှာလေးလှလှလေးမှာ ဝက်ခြံတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ထွက်နေမယ်ဆိုရင် အပြင်ထွက်လို့ အလှပြင်ရင်လည်းအဆင်မပြေ၊ မှန်ကြည့်တိုင်းလည်း စိတ်မချမ်းသာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှုမရှိတွေ ဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ် …။ ဝက်ခြံတွေမြင်မကောင်းအောင် အများကြီးထွက်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲ မျက်နှာပေါ်မှာ ဟိုနားနည်းနည်း၊ ဒီနားနည်းနည်းနဲ့ အမြဲမပြတ်ထွက်နေတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ပျိုမေတို့ မျက်နှာပေါ်မှာ အမြဲမပြတ်နေရာယူထားတဲ့ ဝက်ခြံတွေကို လုံးဝသက်သာစေပြီး မှန်ကြည့်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ဝက်ခြံလေးတစ်လုံး၊နှစ်လုံး ထွက်လာရင် လက်နဲ့သွားသွား ညှစ်ချင်ပါတယ်။ လုံးဝမညှစ်ပါနဲ့၊ လက်နဲ့ မကြာခဏထိတွေ့ခြင်းက ဝက်ခြံကို ပိုဆိုးစေပြီး အမာရွတ်ထင်းထင်းကြီးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်နဲ့ လုံးဝမထိ၊ မညှစ်မိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး နေပါ …။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန် မျက်နှာသစ်ပြီးပြီးချင်း၊ ဝက်ခြံထွက်နေတဲ့နေရာကို … Read more
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဆိုတာ… ဆရာ_ကျမနုပျိုလှပခဲ့ စဉ်တုန်းက ကျမထက် ၁ဝနှစ်လောက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျ ခဲ့တာ ဆရာ အသိပါ …။ အိမ်ထောင်ကျခါစတုန်းက ကျမ အမျိုးသားဟာ အင်မတန် အားကိုးထိုက်တဲ့သူလို့ ခံစားခဲ့ရတယ် …။ ကျမ သူ့ အပေါ်အထင်တကြီးနဲ့ အားကိုးချစ်ခင်ခဲ့တယ် …။ ဒီလိုနဲ့ ….အချိန်တွေကြာမြင့် ပြောင်းလဲ လာတော့ ကျမရဲ့စိတ်တွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ် …။ သူ့မှာအားကိုးချင်စရာ ဘာမှမရှိဘူး။ အထင်ကြီးစရာတွေ မကျန်တော့ ဘူး …။ ကျမကို အရင်လို စိတ်ကိုမကြည်လင်စေတော့ဘူး။ ပျော်ရွှင်မှု မပေးနိုင်တော့ဘူး …။ အဲ့ဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ …? အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုတာ အချစ် ရဲ့သင်္ချိုင်း လေလား …? အိမ်ထောင်ကျသွားရင်သမီးရည်းစားဘဝက အချစ်တွေက ကုန်ဆုံးသွားတတ်လား … Read more
သင့်ဘ၀အခက်အခဲတွေ ကံဆိုးတာတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒီလိုကုသိုလ်တေလုပ်ပါ
သင့်ဘ၀အခက်အခဲတွေ ကံဆိုးတာတွေ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒီလိုကုသိုလ်တေလုပ်ပါ ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော်ရေရော နေ့စဉ်ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာမှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုးရှိတယ် …။ လူတစ်ယောက်ဟာ အကုသိုလ်ဘက်မှာ စွဲသွားပြီဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မကြာခင် မွဲသွားတတ်တော့တာပဲ။ တွေ့ဖူးတယ်မလား၊ အရက်သေစာ သောက်စားမှုကို စွဲသွားတဲ့သူတွေ၊ မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ စွဲလမ်းသွားတဲ့ သူတွေကိုလေ။အဲ့သလို လူမျိုးတွေဟာ မကြာခင် မွဲသွားတတ်တယ်။ တို့ဒေသအခေါ်ကျတော့ အဲ့ဒါမျိုးကို ကင်းပွန်းသင့်တယ်လို့ ခေါ်တာပေါ့ …။ ကုသိုလ်ဘက်မှာ စွဲသွားတဲ့လူတွေကြတော့ မကြာမတင်မှာပဲ ချမ်းသာလာတတ်တယ်ကွ။နေ့စဉ် ပြုနေကျ သောက်တော်ရေကပ်၊ ဘုရားရှိခိုး၊ မေတ္တာပို့၊ အမျှဝေတာလောက်မှ မလုပ်ရရင် တစ်ခုခုလိုနေသလို တွေ့လာပြီ … Read more
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ်စရိုက် တွက်ကြည့်နည်း…
လူတစ်ယောက်၏ ပင်ကိုယ်စရိုက် တွက်ကြည့်နည်း… လူတစ်ယောက်စီမှာ ပင်ကိုယ် `ဗီဇ´ လေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ ပြင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့၊ ကြိုသိထား။ ဆယ့်ရှစ်နှစ် ပြည့်ပြီးရင် ခေါက်ရိုးကျိုးသွားပါပြီ …။ (ဝ) လောဘကြီးသူ (အလိုဆန္ဒပြင်းပြသူ၊ အကျိုးရှိအောင်လုပ်) (၁) ဒေါသကြီးသူ (လူတကာကို လိုက်ဆဲတတ်သူ ၊ ပြတ်သားသူ) (၂) မောဟစိတ်လွန်ကဲသူ (ထိုင်းမှိုင်းသူ၊ ရန်မလိုသူ) (၃) မေတ္တာစိတ်ရှိသူ (ခင်တတ်မင်တတ်သူ) (၄) ဂရုဏာစိတ်များသူ (သနားငဲ့ကွက်တတ်သူ) (၅) မုဒိတာ စိတ်များသူ (အကုန်သူ ကြီးပွားတာ ဝမ်းမြောက်တတ်သူ) (၆) ဥပေက္ခာသမား ( ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဟု သဘောထားသူ၊ လှည့်မကြည့်ပဲ ထားတတ်သူ) ဆိုပြီး (၇)မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ် …။ တွက်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ရယ် … Read more
← Previous Page1 … Page523 Page524 Page525 … Page578 Next →
ယှနျးယှနျးရဲ့အသံဖိုငျဖွနျ့တဲ့တရားခံတှပွေီ့… December 2, 2021
အပတိရူပဒေသ ရန်ကုန် (သို့) ရန်ကုန်မှာ လုံးဝမနေသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ချက် December 2, 2021
ဒီည အားလား…ကမြ ဒီနေ့ စိတျတှေ လှတျပလိုကျတော့မယျ… December 2, 2021